अघिल्लो आवको बैशाख महीनासम्मको तुलनामा ब्यापार घाटा २८ प्रतिशतले बढी-NepalKanoon.com
अघिल्लो आवको बैशाख महीनासम्मको तुलनामा ब्यापार घाटा २८ प्रतिशतले बढी
जेठ ३०, काठमाडौं । गत वैशाख मसान्तसम्ममा कुल ब्यापार घाटा रू. ५ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवको बैशाख महीनासम्मको तुलनामा ब्यापार घाटा २८ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले बढेको थियो। आजको अभियानमा खबर छापिएको छ।
भारत तथा अन्य मुलुक दुवैतर्फको आयातको वृद्धिदर उच्च रहेको कारण कुल आयातको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा उच्च रहन भएको हो । मासिक रुपमा हेर्दा वैशाख महिनामा कुल वस्तु आयात चैत महिनाको तुलनामा ८ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ । पछिल्ला केही महीनायता भारतसँको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएकोमा माघ यता भने केही कमी देखिएको छ ।
समिक्षा अवधिमा निर्यात १८ दशमलव ६ प्रतिशत( रू. ७५ अर्ब १२ करोड) र आयात २६ दशमलव ७ प्रतिशत( रू. ५ खर्ब ८० अर्ब ९३ करोड)ले बढेको छ । भारततर्पm खासगरी जिङ्क शिट, अलैंची, गिट्टी तथा बालुवा र जुस लगायतको निर्यात बढेको छ भने अन्य मुलुकतर्फ ऊनी गलैचा, तयारी पोशाक, जडीवुटी र पश्मिना लगायतको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भारतबाट मुख्यतयाः पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पाटपूर्जा, हटरोल्ड शिट इन क्वायल र धागो लगायतको आयात बढेको कारण त्यसतर्फको आयात उच्च दरले बढेको हो । अन्य मुलुकबाट विशेषगरी सुपारी, कच्चा सोयाविन तेल, पोलिथिन ग्रान्युयल्स, यातायातका साधन तथा पाटपूर्जा लगायतको आयात बढेको कारण त्यसतर्फको आयात बढेको हो ।
शोधनान्तर बचत रू. १ खर्ब १५ अर्ब
गत बैशाखसम्ममा समग्र शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब १५ अर्ब २६ करोड बचतमा रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो बचत रु. ३८ अर्ब ६० करोड रहेको थियो । सोही अवधिमा चालू खाता रु. ७८ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । गत वर्ष यो खाता रु. २८ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको थियो । खासगरी सेवा आय, खुद आय, अनुदान तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको कारण समीक्षा अवधिमा चालू खाता बचत उच्च रहन गएको हो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११ महीना वस्तु आयात
गत वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ । गत असार मसान्तमा यो रू. ५ खर्ब ३३ अर्ब रहेको थियो । चालू आवको नौ महीना(फागुन) सम्मको आयातलाई आधार मान्दा उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११ महीना ४ दिन वस्तु आयात र ९ महीना ९ दिन वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ ।
४ खर्ब ४४ अर्ब विप्रेषण भित्रियो
चालू आवको १० महिनासम्ममा विभिन्न मुलुकबाट रू. ४ खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो साढे २९ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आय अघिल्लो वर्षको ११ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा १४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ । मासिकरुपमा हेर्दा, विप्रेषण आप्रवाह चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनाको तुलनामा वैशाख महिनामा १३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत वैशाख मसान्तसम्ममा कुल सरकारी खर्च (नगद प्रवाहमा आधारित) २२ दशमलव ५ प्रतिशतले, चालू खर्च २८ दशमलव ३ प्रतिशतले र पूँजीगत खर्च ३७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढे । गत आवको सोही अवधिमा सरकारी खर्च २ दशमलव ५ प्रतिशतले र चालू खर्च १ दशमलव १ प्रतिशतले बढे पनि पूँजीगत खर्च ३ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो ।